Wakiilada Neymar oo beeniyay warar soo baxayay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Wakiilada Neymar oo beeniyay warar soo baxayay
Wakiilada Neymar oo beeniyay warar soo baxayay
Wakiilada Neymar ayaa hoos u dhigay wararka la xiriirinaya weeraryahanka inuu ka tagayo kooxda Paris Saint-Germain kuna laabto Barcelona xagaagan.
Wararka la isla dhexmarayo ayaa sheegaya inuu dib ula midoobayo kooxda Barcelona markale 28 jirkaan, kaasoo dhaliyay 105 gool 186 kulan oo uu u saftay La Blaugrana intii u dhaxeysay 2013 iyo 2017.
Sikastaba, warbixinadii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in PSG ay rajeyneyso in weeraryahanku uu sii joogo caasimada Faransiiska, xubin ka mid ah dadka matalaya Neymar ayaa tan iyo xilligaas xaqiijiyay in wax wada hadal ah uusan dhicin si loga hadlo mustaqbalka ninka reer Brazil
Wakiilka ayaa yiri: “Weligeey kalama hadlin Neymar ku soo laabashada Barcelona]. Waqtigaan la joogo, waxa kaliya ee aan kahadleynaa waa coronavirus.
\_ ”Waxaan qabnaa in xagaaga uu xasiloonidoono mustaqbalkiisa. Daacadii, kama hadlayno inaan haatan dhaqaaqno Iyo inaan hehsiiska u kordhino PSG.
Neymar ayaa dhaliyay 13 gool iyo isagoo sameeyay lix caawin 15 kulan oo uu u saftay kooxda Thomas Tuchel xilli ciyaareedkan, waxaana uu arki doonaa heshiiskiisa haatan ee PSG oo dhacaya sannadka 2022.
Previous articleDowladda Somalia oo faah faahisey duqeyn ka dhacdey Shabeellaha Hoose
Next articleCiidamo ka hortaga waxyaabaha qarxa oo tababar loo soo xirey